असुरक्षित मानिसहरू सीमित वास्तविकता बस्ने, त्यो राम्ररी स्थिति आकलन गर्न सक्षम छ, प्रत्येक ठेस लागि आफूलाई reproaches र उहाँले चाहेको गर्न योग्य छैन भन्ने विचार संग मिलाप। सबै थाह; "म आनन्द, राम्रो जब, उच्च ज्याला, आदि योग्य छैन:। प्रश्न कसरी, सेल्फ-भरोसा जुटाउने कहिलेकाहीं अस्तित्वको impermanence को shamefaced विचार गराउँछ नै, आफ्नै म को मूल्य प्रश्नको व्यक्ति दौरा छ तसर्थ, म एक पेसा वा आनन्दित जीवन सोच्न कुनै अधिकार छ, तर मलाई लाग्छ - र म गरिनैपर्छ। "
, मानिस आफूलाई गुमाउनबाट आफ्नै सक्षमता विश्वास को कमी को अर्को हिँड्छ किनभने को विचार जस्तै केहि कम आत्म-सम्मान। को कमी संग मामला छ हाम्रो सुविधाहरु को सबै भन्दा, बाल्यकाल मा सुरु आफूलाई विश्वास र तिनीहरूको बल। अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले, भरोसा विश्वास को कमी / अनुसार - यस छैन एक जन्मबाट प्राप्त गुण हो, र यसैले हामी स्वयं को मूल्य को स्तर प्रभावित गर्न सक्षम छन्।
तपाईं एक पटक आत्म-विश्वास विकास गर्न कसरी प्रश्न बारेमा विचार भने, त्यसपछि हामी "निको" बाटो को शुरुवात बारे कुरा गर्न सक्नुहुन्छ: मनोवैज्ञानिक भन्न रूपमा, त्यसपछि यसको उन्मूलन तिर पहिलो कदम त्यहाँ समस्या छ कि पहिचान।
विशेषज्ञहरु त्यस्तो अवस्थामा सल्लाह? तिनीहरूले डर र शंका हटाउन सिफारिस? आफ्नो आत्म-विश्वास गर्न के सल्लाह?
सबै को पहिलो, हामी टाढा सकेसम्म तपाईं आफ्नो सीमितता र unworthiness बारेमा विचार कारण छ कि मान्छे संग सम्पर्क बाट आफूलाई जोगाउन पर्छ। तपाईं असहज, inexplicable लाज, अन्योल भने, बस तिनीहरूलाई कुराकानी गर्न आवश्यकता को प्राप्त छुटकारा (को पाठ्यक्रम, यदि सम्भव) समुदायको केही श्री एन मा;
अर्को चरण - आत्म-विश्वस्त मान्छे अनुगमन र आफ्नो व्यवहार प्रतिलिपि। आफूलाई मोल गर्ने व्यक्ति चयन गर्नुहोस्। तपाईं हामी सबै भन्दा जस्तै, त्यहाँ कमियां हो, यसलाई सही छैन याद निश्चित लागि हुनेछ, उहाँले, तर आफ्नो उपस्थिति आफ्नै बल विश्वास को एक व्यक्ति वंचित छैन ध्यान उसलाई हेर्न। उहाँले तिनीहरूलाई बारेमा लजालु छ, यसको कमजोरी डराएका छैन, र यसैले आफ्नो वरपरको बेवास्ता गर्नुहोस्। यो चिरपरिचित अभिधारणा जस्तै छ: तपाईं अरूलाई केही कुरा लुकाउन, यो सबै भन्दा conspicuous ठाउँमा राख्न चाहनुहुन्छ भने;
आत्म-विश्वास विकास गर्ने बारे सोच, तपाईं शायद तपाईं आफ्नै कमीकमजोरी को उन्मूलन ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक ठान्छन्। र त्यहाँ केही सत्य, तर के भने छ आफ्नो तागत मा ध्यान? कागज आफ्नो merits को खाली पानामा लेख्न, नातेदार को राय सोध्नुहोस्। तपाईं अर्को सानो कुरा को लागि आफैलाई गाली आउन गर्दा चर्को बाहिर पढ्न, अर्को समय;
प्रत्येक "ठेस" आफैलाई आलोचना, को आलोचना घटनाको को कारण प्रस्ट्याउने मा सहयोग गर्नुपर्छ, र पूर्ण असफलता रूपमा नै चेतना उत्पन्न छैन रोक्न;
तपाईं के सपना हासिल गर्न चाहनुहुन्छ के, आफ्नो भविष्य बारे जस्तो लाग्छ? इच्छित हासिल गर्न योजना विकास। सुरु साना, महत्त्वपूर्ण कुरा गर्न जब सम्भव आफैलाई बधाई। के तपाईं सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सक्ने महसुस गर्दा सफलता यसको फिर्ता र ठूलो मामला मा बारी छैन। केहि असफल भएमा निराश गर्छन्। को शब्दमा थोमस एल्भा एडिसन, सफलता गर्न surest तरिका - फेरि र फेरि प्रयास गर्न फेरि;
आत्म-विश्वास कसरी विकास गर्ने? ... अक्सर हामीलाई अगाडि सार्न अनुमति दिन्छ छैन, एउटै rake मा stepping भयले हामीलाई paralyzes विगतका गल्ती आफैलाई क्षमा गर्न सिक्न। समय समयमा पछिल्लो मनन, तर यसले तपाईँलाई नियन्त्रण गर्न छैन। दोषी, को भावना लाज र सफल गर्न अनुमति छैन। तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्नुहोस्। पछिल्लो परिवर्तन, हामी गर्न सक्छन्, तर जीवनको पाठ देखि त्रुटि हटाउन (र यो हाम्रो भूत, हाम्रो अनुभव छ), हामी सक्षम छन्;
आफ्नो जीवन को मास्टर हुन तपाईं मौकाको आफूलाई depriving छन् त्यसैले, अन्य आफ्नो असफलता दोष छैन। सफल मान्छे जो तिनीहरूलाई आफ्नो ब्यालेन्स राख्न हाम्रो जीवन एक आँधी मा खस्दा मौका दिन्छ, आफूलाई अडान लिन र परिवर्तन;
एक फरक दृष्टिकोणबाट स्थिति आकलन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। बाहिर बाट हेर्नुहोस् धेरै उद्देश्य र उचित छ। त्यसैले तपाईं अरूलाई र आफ्नो कार्यहरू बढी सचेत मूल्यांकन को सहिष्णु हुन सिक्नुहोस्। एकै समयमा तपाईंले स्वीकार गर्न सिक्न रचनात्मक आलोचना र आफ्नै फाइदाको लागि प्रयोग;
आफ्नो जीवनको आनन्द, सूर्य गरेको रेज गर्न मुस्कान को puddles मार्फत खाली खुटा हिंड्न, बच्चाहरु हिंड्न - आफै "वास्तविक" जीवनको विशेषताहरु की, हामी गलत हो र वास्तविकता टाढा सार्दै हुनुहुन्छ। आफैलाई लागि समय बनाउन, आफ्नो मनपर्ने संगीत सुन्न तपाईंलाई मनपर्ने कुराहरू गरिरहेको - हामी निराशा र melancholy यस समय खर्च गर्न चाहे, बाँच्न मात्र एक मौका छ?
आत्म-विश्वास विकास गर्न कसरी प्रश्न, कुनै एकल सही जवाफ त्यहाँ छ। हामी प्रत्येक आफ्नै जीवन परिदृश्य, तपाईंको डर र शंका छ, फरक सबै छन्। तर पनि यो महत्वपूर्ण छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो: हामी साँच्चै परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, हामी आनन्द ढोका खोल्न तयार छन् कि? प्रायजसो, जीवन आफ्नै हातमा डूब ...
किन यति क्रूर मानिसहरू हुन्? राम्रो मान्छे किन हिंसात्मक बन्न गर्छन्?
विधि "6 सोचाइ सलाम" एडवर्ड डे बोनो: आधारभूत सिद्धान्तहरू, उदाहरणहरू
धातुबाट बनेको आफ्नै हातले: स्थापनाको दृष्टान्त
काम गर्न लेट भएकोमा व्याख्यात्मक: कारण, राम्रो-लिखित उदाहरण
कालानुक्रमिक क्रममा पृथ्वी जियोलोजिकल इतिहासको अवधि। जीवनको मूल
चीन ग्याँस पाइपलाइन। ग्याँस चीन एक पाइपलाइन को डिजाइन र रेखाचित्र